1. Inkampani inezixhobo ezinkulu, zasekhaya eziqhubela phambili zokugalela ukuqinisekisa amandla kunye nomgangatho wokusa kunye nomgangatho wenkqubo yokubonelela ngobuninzi.
2. Iqokobhe leplastiki eliphucukileyo nelipheleleyo kunye nenaliti yecandelo kunye nezixhobo zokulahla ziqinisekisa umgangatho wezixhobo zombane nezibane ezingaqhushumbayo.
3. Izixhobo eziphezulu ezizenzekelayo ezizenzekelayo zokulungisa izixhobo kunye nezixhobo ezikhethekileyo ezizimeleyo ezizimeleyo ziqinisekisa ukuchaneka kokulungiswa kweemveliso zombane ezinokuqhuma kunye neemfuno zeeparamitha zobungqina bokuqhuma;izixhobo eziphambili kunye neteknoloji inokunciphisa iindleko zemveliso kunye nokulawula umgangatho wemveliso yobuninzi.
01. Imizekelo yeempawu ezinokuthi zingaqhushumba
Ixesha lokukhupha: 2021-08-19
02. Inqanaba lokukhusela izixhobo
03. Isiseko sobuchwephesha bobungqina bokudubula
04. Iindidi zezixhobo zombane ezingagqabhukiyo
05. Ukwahlulwa kweendawo ezinobungozi
uMzobo woFakelo lweMveliso
01. Umzobo woFakelo lweMveliso
Njengomvelisi ochwepheshile wezixhobo zombane ezingaqhushumba, iimveliso esizinikezela kubasebenzisi zinokuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zabasebenzisi kwaye zithobelane nemigangatho efanelekileyo yelizwe.
Iinkonzo zasemva kokuthengisa ezifana nokusetyenziswa kunye nokufakelwa kweemveliso ezithengisiweyo, ukugcinwa kunye neenkonzo zokulandela umkhondo luxanduva kunye nezibophelelo zethu;Ngoko ke, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza inkxaso yobugcisa, ukulandelwa komgangatho kunye nezinye iinkonzo emva kokuthengisa kubasebenzisi.
Ukubonelela ngenkxaso yobugcisa kuluhlu olupheleleyo lweemveliso zeFeice, kubandakanywa ukubonisana kwemveliso, ukukhethwa kwemveliso kunye nokulungisa iingxaki, njl.
Ukubonelela ngenkxaso kubathengisi beFeice kunye nabathengi abanemathiriyeli yokufaneleka, imibuzo yomnxeba, kunye nolwazi olunxulumene nokuthengwa kwemveliso
Izikhalazo kunye neeNgcebiso
I-Feice ibona ukubaluleka okukhulu kwingqokelela yezikhalazo zabathengi kunye neengcebiso, kwaye iya kuba nomntu ozinikeleyo ukuba abhale kwaye alandele yonke inkqubo yokuqinisekisa ukuba isikhalazo ngasinye somthengi kunye neengcebiso ziphathwa kakuhle.